Vaovao - Antony mahatonga ny lazan'ireo tavoahangy vita amin'ny sokay soda
Antony mahatonga ny lazan'ny tavoahangy vita amin'ny sokay soda
Ny tavoahangy fitaratra dia kaontenera ho an'ny fanafody, sakafo ary vokatra fitsaboana. Anisan'ireny, ny tavoahangy vita amin'ny veromanitra soda dia vita tamin'ny akora madio ary nodiovina tamin'ny atrikasa fanadiovana haavo 100 000. Mora ny manamboatra tavoahangy vera soda-sokay, misy endrika maimaim-poana sy miovaova, ary karazan-tavoahangy isan-karazany. Fa maninona no malaza be ny tavoahangy vita amin'ny vera vita amin'ny soda? Ny tavoahangy vera soda-sokay dia vita tamin'ny vera soda-sokay ara-pahasalamana ho toy ny akora, izay manana fitoniana simika tsara, fanoherana asidra, fanoherana alkali ary fanoherana ny harafesina. Azo ampiasaina amin'ny fitoeram-panafody misy fanafody isan-karazany. Ny tavoahangy vita amin'ny veromanitra soda dia manana toetra mekanika marin-toerana. Izy io dia mahazaka ny tsindry anaty tavoahangy mandritra ny fitaterana sy ny hery ivelany mandritra ny fitaterana ivelany. Nahavita fandrosoana lehibe tamin'ny fanoherana ny fandravana izy. Ny famaritana samihafa dia misy fahaiza-manao samihafa, izay afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa amin'ny fahaizan'ny vokatra samihafa. Ny fahaiza-manao samihafa dia misy karazana sarony isan-karazany, ary ny fanasokajiana ny sarony dia isan-karazany ihany koa. Izy io dia azo ampitaina amin'ny fonosana aliminioma, fonosana alimika anodized, fonosana plastika misy loko isan-karazany, gasket butyl, gasket silika, pe gasket, sns. Ny tavoahangy vita amin'ny veromanitra soda dia manana fahaiza-manao feno. Ny mpanjifa dia afaka misafidy mifanaraka amin'ny fahaizan'ny vokatra ilainy, ary azo namboarina ihany koa arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Ny kalitao dia mifanaraka tanteraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa, ary hanao izay fara herinay izahay hamenoana ny takian'ny mpanjifa.
Ny fonosana tavoahangy Coca-Cola dia nampiasaina nandritra ny 100 taona mahery. Tsy Coca-Cola ihany io, fa fotoana iray tokony hotadidina ihany koa amin'ny sehatry ny fonosana. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostrialy ankehitriny, ny vokatra dia ampidirina haingana. Ny fonosana vaovao sasany dia nosoloin'ny fonosana hafa alohan'ny hahafantaran'izy ireo ny mason'ny olona. Fonosana tavoahangy vera efa nampiasaina efa ela. Nandritra ny 100 taona mahery, tena misy dikany io. Raha ny marina, avy amin'ny famakafakana ireo angon-drakitra isan-karazany, ny hafainganam-pandehan'ny fonosana tavoahangy fitaratra aorian'ny fampiasana dia tena miadana kokoa noho ny fonosana hafa toy ny plastika sy baoritra. Ny anton'izany dia satria avo lenta ny vidin'ny famokarana tavoahangy tavoahangy fitaratra, ary ho avo amin'ny lafiny rehetra ny fanoloana ny fitaovana famokarana. Ny lafiny iray hafa dia ny vokatra fonosana tavoahangy fitaratra amin'ny ankapobeny ampiasaina amin'ny vokatra avo lenta, ary ny mpanamboatra tavoahangy fitaratra dia mitaky fitakiana matanjaka amin'ny fitoniana amin'ny fonosana vokatra. Fa mba hahatratrarana fonosana mahazatra toy ny tavoahangy fitaratra Coca-Cola, mbola betsaka ny zavatra tokony hatao. Indrindra amin'ny dingana voalohany amin'ny famolavolana fonosana ho an'ny tavoahangy fitaratra dia mila asa bebe kokoa ary ilaina ny fikarohana bebe kokoa amin'ny tsena. Ho an'ny mpanamboatra iray, raha azo amboarina amina mahazatra ny fonosana tavoahangy fitaratra dia tsy hanampy fotsiny ny famolavolana ny marika , fa ho an'ny tsipika famokarana, hofoanany ny vidin'ny fanoloana, ary koa hampihena ny fandaniana amin'ny lafiny samihafa amin'ny fiofanana momba ny asa ataon'ny mpiasa. . Noho izany, ny famolavolana fonosana tavoahangy fitaratra mahomby dia azo lazaina ho mahasoa sy tsy mampidi-doza ho an'ireo mpanamboatra.
Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy,